#Atomicchat: Okuqukethwe okwenziwe ngumsebenzisi | Martech Zone
NgeSonto, ngoJuni 15, i-2014 Douglas Karr
Uma u ngilandele ku-Twitter, Sibe nesikhathi esimnandi sokuxoxa nabantu e-Atomic Reach sikhuluma ngokuqukethwe okwenziwe ngumsebenzisi (UGC). Nakhu okuvelele nokuthatha ukhiye kusuka ku- Ingxoxo ye-Twitter ye- # AtomicChat, isingathwe njalo ngoMsombuluko ebusuku ngo-9 ebusuku EST / 8pm CST / 6pm PST. Landela @Ukhozi_fm yazo zonke izibuyekezo zakho zokumaketha kokuqukethwe!
Okufushane kwe okuqukethwe okwenziwe ngumsebenzisi, I-UGC yigama elisetshenziselwa ukuchaza noma yiluphi uhlobo lokuqukethwe njengevidiyo, amabhulogi, okuthunyelwe kwamafomu engxoxo, izithombe zedijithali, amafayela alalelwayo, nezinye izinhlobo zemidiya ezenziwa ngabasebenzisi noma abasebenzisi bokugcina bohlelo noma isevisi eku-inthanethi futhi etholakala emphakathini kwabanye abathengi nabasebenzisi bokugcina. Okuqukethwe okwenziwe ngumsebenzisi kubizwa nangokuthi i-consumer generatedmedia (CGM). I-Webopedia
Sibonga u Ukufinyelela Kwe-Atomic ukuthola elinye ithuba elihle!
Tags: ukufinyelela kwe-athomumthokodouglas karrdouglaskarringxoxo ye-tweetTwitteringxoxo ye-twitterugcokuqukethwe okwenziwe umsebenzisi